Zinedine Zidane Oo Ka Hadlay Kalsooni Darada Heysata Eden Hazard Iyo Qaabkiisa Liita Ee Kooxda
HomeWararka Ciyaaraha MaantaZinedine Zidane oo ka hadlay kalsooni darada heysata Eden Hazard iyo Qaabkiisa liita ee kooxda
January 15, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain 0
Real Madrid tababaraheeda Zinedine Zidane ayaa qirtay in Eden Hazard ay wali heysato kalsooni daro ka dib markii xidiga Belgian uu sii watay qaab ciyaareed liita ee kooxdiisa kulan 2-1 ka soo gaartay Athletic Bilbao oo looga reebay Spanish Super Cup.
Xiddiga reer Belguim, oo ahaa Saxiixa ugu qaalisan ee Real, ayaa dhaliyay kaliya labo gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxaana uu soo bandhigay wax yar oo dhanka weerarka ah ka dib markii uu ku guuldareystay inuu abuuro kubado badan kulankii sabtidii hore ee 0-0 ku dhamaaday ee Osasuna.
“ Wuxuu ubaahanyahay kalsooni uu ku, ciyaaro kulan weyn ama inuu dhaliyo gool, kaliya inuu sameeyo wax kaduwan. Waan ognahay waxa uu yahay ciyaaryahan weyn, waxaana u baahanahay inaan u dulqaadano maadaama uu si adag u shaqeynayo, ”ayuu Zidane u sheegay suxufiyiinta.
Waan ka dambeeynaa isaga waana inaan siino waqti. Taageerayaashu waxay rabaan inay arkaan qaabka ugu fiican ee Eden sidaa darteed waa inaan dulqaad muujino. Waan ku dhagannahay isaga runtiina wuxuu doonayaa inuu sare u qaado.